I Joany izay...
Zoma 07 febroary 2020 — Herinandro fahefatra mandavantaona — Evanjely Masina nosoran'i Masindahy Marka 6, 14-29 — Ampianaro ahy, ry Tompo, ny soritrao; tariho amin'ny Fahamarinanao aho.
Naniraka azy ireo Izy
Alakamisy 06 febroary 2020 — Herinandro fahefatra mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 6, 6-13 — Alao tampina ny masoko, ry Tompo, hibanjina ny zava-mahagaga amin'ny lalanao.
Tsy misy mpaminany tsy enin-kaja...
Alarobia 05 febroary 2020 — Herinandro fahefatra mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 6, 1-6 — Sokafy, ry Tompo ny fonay, mba hitandremanay ny tenin-Janakao.
Ry zazavavy... mitsangàna
Talata 04 febroary 2020 — Herinandro fahefatra mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 5, 21-43 — Mahatoky ny lahatrao, ry Tompo, ary mafy orina mandrakizay alaovalo.
Pejy 74 amin'ny 90